Aqoonsiga ruby-ga ah ee la buuxiyay, Fissure ruby ​​buuxsamay - video
Tags buuxsamay, Muraayadda ayaa la buuxiyey, Ruby
Buuxinta jajabka ama jajabyada kujira gudaha rubiga galaaska leedhka ama shey la mid ah waxay si weyn u wanaajineysaa daah furnaanta dhagaxa, taasoo ka dhigeysa rubi hore aan ku habbooneyn oo ku habboon codsiyada dahabka Aqoonsiga ruby-ga ah ee laga buuxiyay waa mid fudud oo qiimihiisu ka jaban yahay ruby ​​aan la daaweyn.
Dukaankeenna ku soo iibso ruby ​​laga buuxiyey muraayad
Dhalada leedhka oo laga buuxiyey ruby
Dhagxaanta qallafsan ayaa horay loo sifeeyay si loo ciribtiro dhammaan nijaasta dusha sare ee saamaynta ku yeelan kara geedi socodka
Dhagaxa qallafsan waxaa lagu nadiifiyaa hydrogen fluoride
Nidaamka kuleylka ugu horreeya inta lagu gudajiro oo aan wax lagu darin. Nidaamka kuleylintu wuxuu tirtirayaa waxyaabaha nijaasta ah ee ku jira jajabka. In kasta oo tan lagu samayn karo heer-kulka illaa 1400 ° C (2500 ° F) haddana waxay u badan tahay inay ka dhacdo heer-kulka qiyaastii 900 ° C (1600 ° F) maaddaama xariirku aanu wali shaqeynin.
Nidaamka kuleylka labaad ee foornada korantada oo lagu daro waxyaabo kiimiko ah oo kala duwan. Xalal kaladuwan iyo iskudhafyo ayaa muujiyey inay guuleysteen, hase yeeshe inta badan inta badan macdanta-ku jirta galaaska-budada ayaa xilligan loo isticmaalaa. Ruby-ga ayaa lagu shubayaa saliid, ka dibna lagu daboolay budo, oo lagu duubay dusha sare waxaana lagu ridayaa foornada halkaasoo lagu kululeeyo qiyaastii 900 ° C (1600 ° F) hal saac jawiga oksidheeyaha. Budada midabka liinta leh waxay isku bedeshaa kuleylka midab huruud ah oo midab huruud ah leh, kaas oo buuxiya dhamaan jajabka. Ka dib qaboojinta midabka koollada ayaa si buuxda u hufan oo si weyn u hagaajinaya hufnaanta guud ee ruby.
Haddii midab loo baahan yahay in lagu daro, budada muraayadda ah ayaa "lagu sii wanaajin karaa" naxaasta ama birta kale ee oksaydhka ah iyo sidoo kale walxaha sida sodium, calcium, potassium iwm
Nidaamka kuleylka labaad waxaa lagu celin karaa seddex ilaa afar jeer, xitaa la isku dabaqayo isku dhaf kala duwan. Marka dahabka ay ka kooban tahay luuli lagu kululeeyo dayactirka. Waa inaan lagu daboolin boracic acid ama walax kale, maxaa yeelay taasi waxay xawili kartaa dusha sare. Maaha in loo ilaaliyo sidii dheeman oo kale.
Aqoonsiga ruby ​​oo buuxa
Daaweynta waxaa lagu aqoonsan karaa iyadoo la xuso goobooyin godadka iyo jajabka iyadoo la adeegsanayo 10 × loupe.
Sideen ku ogaan karaa in ruby ​​dhalada ka buuxo?
Astaamaha muuqaalka ugu caansan ee ruby ​​isku dhafan ayaa ah goobooyinka gaaska gudaha. Kuwani waxay noqon karaan hal dhinac ama daruuro goobooyin ah, oo fidsan ama la soo koobay, waxayna ku wada jiraan gabi ahaanba jajab buuxa. Mararka badankood, waa la arki karaa xitaa isha aan la caawin.
Muraayadda ma buuxsantay Ruby?
Haa, Waa dhagax la daweeyay. Waxaa loo abuuray iyadoo la adeegsanayo kuleyl iyo walxo si loo keeno midabka casaanka qoto dheer sida ruby ​​aan la daaweyn, Dhagaxa qaaliga ah waxaa lagu daaweeyaa si loo buuxiyo jabka ku jira dhagaxa. Dhagxaantaasi waxay u eg yihiin dhagaxyo aan la daaweynin, laakiin uma dhigmayaan xoogga iyo adkeysiga ay leeyihiin dhagxaanta dhabta ah.
Juliisyada dhalada ka buuxsamay miyaanay qiimo lahayn?
Qiimaha ruby-ga ka buuxay ayaa aad uga raqiisan ruby ​​aan la daaweyn. Waxtarka daaweynta waa mid la yaab leh, taas oo ah inay u beddeleyso corundum oo ah mid mugdi ah oo ku dhowaad aan qiimo lahayn u leh qalab si hufan ugu filan isticmaalka dahabka. Dhab ahaantii, dhagxaanta waxay umuuqan karaan kuwo aad uqurux badan iibsade aan la hubin. Waxay noqon kartaa toban ilaa kun jeer ka jaban dhagaxa la midka ah ee aan la daaweynin.
Ku soo iibso ruby ​​ka buuxsamay muraayad dukaankeenna qaaliga ah
Waxaan ku sameysannaa dahab la isku qurxiyo oo leh ruby ​​buuxsan sida giraan, hilqado, jijin, silsilad ama suumanka.
Ruby xiddig dabaysha
Tags Ruby, xiddiga, Senttetik